Olole nadaafadeed oo ka billoowday qaybo ka mid ah Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Olole nadaafadeed oo ka billoowday qaybo ka mid ah Muqdisho
Olole nadaafadeed oo ka billoowday qaybo ka mid ah Muqdisho
Muqdisho-(SNTV) Waxaa qaybo ka mid ah Gobolka Banaadir xalay ka billoowday Olole nadaafadeed oo lagaga hor tagayo wasaqda ka dhalataa xilli Roobaadyada.
Ololahan nadaafadeed ayaa laga sameeyey Laamiga Suuqa Degmada Karaan Gobolka Banaadir, iyadoo lala tacaalayay sidii loo hagaajin lahaa Carada ay soo ragaan Biyaha Roobka oo xilligan oo kale xira Waddooyinka waaweyn ee Caasimadda.
Guddoomiye ku xigenka arrimaha bulshada Gobolka Banaadir, Basma Caamir Shikeeti, maamulka Degmada karaan, howl-wadeenada Dowladda hoose iyo qaar ka mid ah shacabka degmadaas ayaa hormuud ka ahaa ololahaan.
Guddoomiye ku xigeen amniga iyo siyaasadda ahna kusimaha guddomiyaha Degmada Kaaraan , Saalax Maxamed ayaa sheegey ololahan nadafadeed ee ka billowday Degmada Karaan inay qorsheyeen inuu socon doono Sedex Maalmood.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka Gobolka Banaadir, Basma Caamir Axmed ayaa shacabka iyo maamulka Degmada karaan ku amaantay isxilqaanka iyo shaqada wanaagsan ee ay qabanayaan, waxeyna intaa ku dartay inuu maamulka Gobolka Banaadir wado qorshe cusub oo bilicda Caasimada lagu soo nooleynayo.
Intii uu socday ololahan nadafadeed ayaa godoomiyaha arrimaha bulshada maamulka Gobolka Banaadir waxey xog waraysi ku aaddan sida ay suurto galka u tahay soo celinta bilicda Degmada Kaaraan la qaadataya Dadka ganacsiyada kala duwan ku leh hareeraha waddooyinka shaqada laga hayay.
Previous articleShir loga arinsanaayo sidii xal logu heli lahaay fatahaadaha oo lagu qabtay kenya
Next articleMadaxweynaha Dalka oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid Allaha U naxariistee Xildhibaan Khaliif Cabdullaahi